Ubomi bokuqala ngaphambi kwexesha le-Devoni
Ixesha le-Devoni (i-416-360 yeMillion Years Ago)
Ukususela kumbono womntu, ixesha le-Devoni lalixesha elibalulekileyo lokuziphendukela kwempilo yobomi : le nto yayiyixesha lomlando we-geological xa i-tetrapod yeyokuqala inyuke ekhungweni lwamazi amakhulu kwaye yaqala ukukolisa umhlaba owomileyo. I-Devonian ibambe iqela eliphakathi le- Paleozoic Era (iminyaka engama-542-250 yezigidi edlulileyo), ilandelwa ngamaxesha aseCambrian , ama- Ordovician neSiluriya kwaye ilandelwa ngamaxesha eCarboniferous namaPermi .
Imozulu kunye nejografi . Imozulu yomhlaba wonke ngexesha le-Devonian yayimangalisa, ngamaqondo aphezulu asemanzini okushisa "kuphela" ama-80 ukuya kuma-85 amaFahrenheit (xa kuthelekiswa nokuphakama kwama-120 degrees ngexesha elidlulileyo le-Ordovician neSilurian). Amantla kunye neMzantsi wePolisi bekuncinci nje kuphela kuneendawo ezikufutshane ne-equator, kwaye kwakungenayo i-ice caps; iifriciers kuphela ezafumaneka kwiindawo eziphakamileyo zeentaba. Amazwekazi amancinci aseLaurentia kunye neBaltica ngokuthe ngcembe adibanisa ukwenza i-Euramerica, ngelixa iGondwana enkulu (eyayihlose ukuhlukana nezigidi zeminyaka kamva eAfrika, eMzantsi Melika, e-Antarctica nase-Australia) yaqhubeka ihamba ngokunyuka kwezantsi.
Ubomi Bomhlaba Ngexesha Lexesha LikaDevyon
Amaqabane . Kwakukho ngexesha le-Devonon ukuba i-archtypal event event event in the history of life took place: i-fish-finned fish in finished life in the dry land.
Abaviwa ababini bezona zihamba phambili ze- tetrapod (ii-vertebrates ezine ezineenyawo) zi- Acanthostega kunye ne-Ichthyostega, ezazisuka zivela ngaphambili, zizodwa zizilwanyana zaselwandle ezifana ne- Tiktaalik ne-Panderichthys. Okumangalisa kukuba, amaninzi ala ma-tetrapod asekuqaleni ayenazo iinombolo ezisixhenxe okanye ezisibhozo kwiinyawo zawo, okuthetha ukuba zimelele "iziphelo ezifileyo" ekuziphendukeleni kwemvelo - ekubeni zonke iinkozo zomhlaba ezisemhlabeni namhlanje zisebenzisa i-five finger-toe body plan plan.
Ezingabhalanga . Nangona i-tetrapod ngokuqinisekileyo yayiyiindaba eziphambili zexesha lama-Devoni, ayengeyena kuphela izilwanyana ezalalisa umhlaba omile. Kwakhona kwakukho uluhlu olubanzi lwee-arthropods ezincinane, iimbungu, iintsholongwane ezingenakubalwa kunye nezinye izilwanyana ezingenazintlu, ezazisetyenziselwa iindawo eziphilayo eziyinkimbinkimbi zomhlaba ezaqala ukuphuhliswa ngeli xesha ukuze zisasaze ngaphakathi kwehlabathi (nangona kunjalo zingekho kude kakhulu namanzi emzimbeni ). Ngeli xesha, nangona kunjalo, ubuninzi bomhlaba emhlabeni buhlala bunzulu emanzini.
Ubomi boLwandle ngexesha lexesha le-Devoni
Isikhathi saseDonaldon sigxininiswe kwinqanaba kunye nokupheliswa kweentcoderms, iintlanzi zokuqala zentlanzi ezibonakaliswe zixhobo zabo ezinqabileyo (ezinye i-placoderms, ezinjengeDunkleosteus enkulu, zifumana ubunzima beetoni ezintathu okanye ezine). Njengoko kuphawuliwe ngasentla, i-Devonian nayo ihlaziywe ngentlanzi ehlawulweyo, apho i-tetrapods yokuqala yavela khona, kunye neentlanzi ezinokutsha ezixutywe yi-ray, intsapho eninzi kakhulu emhlabeni. Iehoshaki ezincinci - ezinjengeStellcanthus eziqhaqhaqhazelisayo kunye neCladoselache engenakulinganiselayo - yinto ebonakalayo ngokuqhelekileyo kumaLwandle aseDonononi. Ama-invertebrates afana nama-sponges kunye nama-corals aqhubeka ekhula, kodwa iinqanaba ze-trilobites zacuthwa, kwaye kuphela i-eurypterids enkulu (i-invertebrate sea scorpions) ngokuphumelelayo ikhuphisana neentlanzi ezilumkileyo.
Ubomi beZityalo ngexesha lePeriod Devoni
Kwakuye ngexesha le-Devonon ukuba imimandla epholileyo yelizwekazikazi eguqukayo yaqala ukuba yi-green. I-Devonian yabona amahlathi kunye namahlathi abalulekileyo, ukusasazeka kwezinto ezazisinceda ukhuphiswano lokuziphendulela phakathi kwezityalo ukuqokelela ukukhanya kwelanga kangangoko kunokwenzeka (kwindawo eninzi enehlathi, umthi omude unenzuzo enkulu ekuvuneni amandla phezu kwe-shrub encinci ). Imithi yexesha elide laseDebononi laye laqala ukuguqula i-bark engumgubo (ukuxhasa ubunzima bayo nokukhusela iinqwelo zabo), kunye nokusebenza kwamanzi okusebenza ngaphakathi okuncedisayo ekuncedeni ukulwa nombane.
Ukuphela kweDistern Devon
Ukuphela kwexesha lakwa-Devonia lithatyathwa ngokutsha kokuphela kokuphila kwangaphambili kwimeko yomhlaba, okokuqala kukuphela kwesiganeko sokuphela kwexesha laseOdodovician.
Azikho onke amaqela ezilwanyana ezachaphazeleka ngokulinganayo nge-End-Devonian Extinction: ii-placoderms yokuhlala kunye ne- trilobites zazisengozini kakhulu, kodwa izinto ezinzulu-olwandle zazisinda ngokungahambi. Ubungqina bubungqungquthela, kodwa amaninzi aphilisa i-paleontologists akholelwa ukuba ukutshabalalisa kweMadononi kubangelwe yimpembelelo emininzi ye-meteor, i-debris apho ingaba yingozi ngobuncwane bendawo yamachibi, olwandle kunye nemifula.
Okulandelayo: Ixesha leCarboniferous
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseRhode Island
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala Zase-Oregon
I-Dinosaurs ebaluleke kakhulu kwi-North America
Ubomi Bemizwelo Yezilwanyana
Iimifanekiso zePoshethi yeeNkcubeko kunye neeprofayili
Iisongelo zoLwandle oluLwandle
Yintoni i-Ocean Impact?
Iimoto zeNtsapho ekhulayo
Indlela yokudibanisa iLwimi elithi "Dare" ngesiTaliyane
I-University of St. Edward's GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
7 Iingcebiso Kuphi Ukufumana Ukuphicothwa
Imbali ye-Sun Clocks, ii-Clock Water kunye ne-Obelisks
Zingakanani Iindleko zeGalofu zezifundo?
I-MCAT: Ngovavanyo lwe-College College Admissions Test
Ukubonelela & Ukufuna Ukusebenza Umbuzo
Amagama aqhelekileyo adidekileyo: Amanqatha kunye namava
Oko Kufuneka Ukwazi Ngokufudukela Kwabemi kunye noLwaphulo-mthetho